TSY FITIAVANA FOTSINY NY FILOHA RAVALOMANANA NO NAMOTEHANA NY FIRENENA – MyDago.com aime Madagascar
TSY FITIAVANA FOTSINY NY FILOHA RAVALOMANANA NO NAMOTEHANA NY FIRENENA
Tsy fitiavana fotsiny ny filoha Ravalomanana hoy Raguy androany teny amin’ny Magro Behoririka no namotehana ny firenena indrindra fa fialonana. Porofon’izany ny nanonganana azy teo amin’ny fitondrana, ary ny famotehana ny fananany manerana ny Nosy.Isika malagasy dia notezaina tamin’ny fanjanahantany vaovao dia nialona ny namana tafakatra fa maninona ny hafa no tsy potehina. Ny filoha Ravalomanana dia manana traikefa, nanomboka tamin’ny ben’ny tanana ka hatramin’izy filohampirenena. Gaga aho naheno tamin’ny fahitalavitra an’i Ny Hasina nilaza fa hanao autoroute. Efa tetikasa nolazain’ny movansa Ravalomanana izany tamin’ny fampielezankevitra. Noho izany dia miomana isika fa tsy ekentsika ho an’ny Mapar ny tananan’Antananarivo renivohitra, rehefa azontsika io dia azontsika ny fahefana
Andriamatoa Ignace dia nanambara far aha notendrena ho Praiminsitra Kolo Roger dia be ny nilaza fa tsy mahafantatra an’I Madagasikara izy. Mahay tsar a ny fomba fanaovana politika any Soisy izy. Ny any raha olona efa manana afera dia efa voakina raha hitantana firenena ka aza manantena ny hotendrena izany. Io fomba fanaovana politika io no iriko ho entiny eto saingy nandiso fanantenana ahy ilay izy. Hay hain’ny Praiminisitra tsara ny toetsain’ny mpanao politika. Amin’izao fotoaa izao te hanao zavatra be dia be ny fanjakana fa tsy any aminy ny lakile fa any amin’ny filoha Ravalomanana. Ny antony , rah a te hamorona asa telo arivo dia any amin’I dada ny lakile, avelao izy hody eto dia iray volana dia mamokatra ny Tiko. Raha te hitady fifandraisana iraisampirenena dia any aminy izany. Raha hiresaka fitoniana politika dia eto amin’ny Magro fa ity no tsy nahavitan-dRajoelina ny fifanarahany.
Izahay vonona hanolotanana fa avelao aloha hiverina eto I Dada ary afaka manana ny zompirenena tahaka ny olona rehetra. Misy adidiy tsy maintsy efaiko eto amin’ny kianja hoy ny depiote Rodin voafidy tany Arivonimamo ka tonga eto ny tenako. Folaka ihany ireo Mapar ao Tsimbazaza. Mahery ny zanak’I dada amin’ireo depiote 95 nanao Sonia ny fitsipika anatiny. Aleo hivoakaao anatin’ny roan a telo andro izany fitsipika anatiny izany fa hisy olona tsy hahazaka ao. Manomboka amin’nyAlatsinainy dia misy vola iray milliard hozarain’ny sasany any, hamoriana olona ilazana fa tsy manaja ny lalampanorenana ny mpitondra ka ndao hanao sakoroka. Avelao ny zanak’I dada hitazana fotsiny. Manomboka androany dia tsymaintsy apetraka ny fokotim, distim satria mbola hiatrika fifidianana ben’ny Tanana isika. Ho ravaina atsyho atsy ny fokontany ka dia miomana dieny zao isika mametraka ny fototra. Matokia ianareo mpitolona fa tsy hivadika aminareo izahay na dia 20 aza izahay ao amin’ny Antenimierampirenena, ka tsy maintsy antsoina hiatrika ady.
RAVELONANOSY MAMY TIANA : TSY MANDROSO ITY FIRENENA ITY RAHA TSY TONGA NY FILOHA RAVALOMANANA
Auteur Solo Razafy*Publié le 26 avril 2014 Catégories Politique
3 pensées sur “TSY FITIAVANA FOTSINY NY FILOHA RAVALOMANANA NO NAMOTEHANA NY FIRENENA”
28 avril 2014 à 0 h 25 min
Le primum movens , l’origine de cette crise artificielle a été les conséquences des mauvaises gestions socio-économiques et politique des trois dats de Ratsiraka!
Les mauvais résultats que les MALGACHES n’ont *lus acceptés à subir , ce qu explique
la sanction que les MALGACHES ont infligée à l’équipe de Ratsiraka dès le premier tour des scrutins !
Certains ont évoqué des attitudes éthniques ,un comportement mégalomaniaque de Ratsirak qui n’a pas accepté sa défaite après trois mandats trop faciles à gagner maus qui se sont avérés difficiles à assumer sur le plan des programmes trop velléitaires et ambitieux ayant frisé la pédanterie et la vanité !
La françafrique ayant constaté les dégâts (M.car est devenu attrayant pour de nombreus Pays grands consommateurs de matières premières , par exemple Chine les USA en ce qui concerne le coton–opération AGOA , le plan-programme -pétrole américain…et autrs matières premières stratégiques que nécessitent les industrie d’innovation aux USA ,sans épiloguer sur la position géo-stratégique de MADAGASCAR §!!
La françarique devant ces faits et consatant l’essor socio-économique enregistré en SEPT AS par les malgaches sus la DIRECTION DE MONSIEUT LE PRESIDENT RAVALOMANANA MARX ,A a pris la décision inique de tout détruire dans un Pays indépendant , sans attitude belligérante envers l4eTAT français ,a donné l’ordre à rajoelina et à Ratsiraka de faire un coup d’état à MADAGASCAR !
madaAFRIKA dit :
Valim-babena ad vitam aeternam ? Rakety manara-penitra ?
Précédent Article précédent : REHEFA TSY AO ANATY BIRAO MAHARITRA NY MOVANSA RAVALOMANANA DIA ALEO AJANONA
Suivant Article suivant : TSY HIJANONANA NY TOLONA ETO AMIN’NY MAGRO FA VAO MAIKA HAMAFISINA IZANY